Shiinaha SPC Dabaqa 503 Warshad iyo Warshad | Dheeraad ah
Faahfaahinta: 1210 * 183 * 5mm
Iibsi iyo soo jeedin
1. Waxaa fiican in la doorto badeecado dhumucdoodu tahay 5mm ama ka badan.
2. Haddii aad wax ka iibsaneyso internetka, waxaa fiican inaad lacag ku qarashgareyso inaad wax ku iibsato (waxaad u maleyneysaa in qiimaha uu ku habboon yahay) shaybaarro isbarbardhig ah, si loo arko haddii qaabka qaabdhismeedka uu yahay mid aad u hooseeya, ka dibna dhammaan shaybaarada ku rid sanduuq xiran si aad u aragto midkee leh dhadhan yar (vinyl chloride wuxuu leeyahay ur la mid ah eterta, dadka qaar waxay dhahaan waxay u egtahay mooska qurmay ama dacas caag ah?)
3. Laab adag. Haddii qalabka PVC-ga uu wanaagsan yahay, way fududahay in la soo kabsado oo aan sahlaneyn in la caddeeyo.
4. Iibso dhowr qaybood oo waraaqo ciideed ah oo qeexitaano kaladuwan leh (600 mesh, 300 mesh, 180 mesh, tirada yar ayaa ah, way ka sii dhib badan tahay), kuna nadiifi shaybaarka si aad u aragto muunada u adkeysiga badan u adkeysiga leh.
5. Hubi shahaadada tijaabada ilaalinta deegaanka ee xanjada ama xabagta.
6. Ku riix dusha mashiinka wax lagu duubo si aad u aragto saameynta adkeysiga iyo saameynta u adkeysiga.
"SPC floor" waxaa loola jeedaa sagxadda laga sameeyay qalabka SPC. Gaar ahaan, SPC iyo cusbada copolymer-keeda waxaa loo isticmaalaa inay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceyriinka, buuxiyo, baco-dejiyeyaal, xasiliyayaal, midabeystayaal iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah ayaa lagu daraa, kuwaas oo lagu soo saaro shaashadda joogtada ah ee warqadda iyadoo la adeegsanayo habka dahaadhka ama isku darka, isku-darka ama soo-saarista.
Dabaqa SPC waa nooc cusub oo caan ah oo ah walxaha qurxinta dabaqa miisaanka fudud ee adduunka, oo sidoo kale loo yaqaan "dabaqa miisaanka fudud". Waa badeecad caan ka ah Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ee Yurub, Ameerika iyo Aasiya. Waxay caan ku tahay dibedda oo si ballaaran ayaa loo adeegsadaa, sida qoysaska gudaha, isbitaalada, iskuulada, dhismayaasha xafiisyada, warshadaha, meelaha dadweynaha, dukaamada waaweyn, ganacsiyada, garoomada iyo meelo kale.
Guud ahaan dhumucdiisuna 5mm
Qeexitaanka cabbirka 1210 * 183 * 5mm
Hore: Dabaqa SPC 502
Xiga: Dabaqa SPC 1901
Dabaqa SPC 507
Dabaqa SPC 505
Dabaqa SPC 506
Dabaqa SPC 502